ဆံပင်ဆိုးဆေး များကြောင့် ကင်ဆာရော ဂါဖြစ်ပွားနိုင်
ဆံပင်ဆိုးဆေးကို အသုံးပြုများတာ ကြောင့်သားမြတ်၊ ဆီးအိမ်၊ မမျိုးဥအိမ်၊ ဦးနှောက်နဲ့ သွေးကင်ဆာ တွေ ဖြစ်နိုင် တယ်လို့ ယခင်က လေ့လာမှုတွေအရ သိရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အခုချိန်မှာ ဆံပင် ဆိုးဆေးကို အသုံးပြု သူတွေ များပြားလျက် ရှိတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဆံပင်ဆိုး ဆေးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တွေဟာဆေး လိပ်ငွေ့နဲ့ တခြားလေ ထုညစ်ညမ်း စေတဲ့ပစ္စည်း တွေ နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းထက် ဆုံး ဒြပ်ပေါင်းတစ် မျိုးကိုဖန် တီးပေးနိုင် တယ်လို့သိပ္ပံ ပညာ ရှင်တွေက တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ယနေ့ အချိန်ခါ မှာ အမျိုးသမီး သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ယောက်နှုန်း ဆံပင် ဆိုးဆေးကို အသုံးပြု နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ကိုးကြိမ်ထက် ဆံပင်ဆိုးဆေး အသုံးပြု တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားတယ်လို့ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ှ
Secondary Amines ဝင်တတ်ပြီး ဆံပင်ဆိုးပြီး နောက်ဦး ရေပြားအတွင်း ဝင်ရောက်နိုင် ကာဆံပင် ပေါ်မှာလည်း သီတင်း ပတ်ပေါင်း၊ လပေါင်း များစွာ ရှိနေနိုင်ပါ တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာထိတောင် ရှိနေ နိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဓာတု ပစ္စည်းဟာ ဆေးလိပ်ငွေ့နဲ့ မော်တော် ကား အိပ်ဇောငွေ့တွေနဲ့ ဓာတ်တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပြီး အလွန်အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်းN-nitrosanimes တွေ ဖြစ်ပေါ် ကာ ကင်ဆာ ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်တယ် လို့ သုတေသီတွေက မှတ်ချက်ပေးထား ပါတယ်။
အေးချမ်းမွန်မှ GOOD HEALTH တွင်ရေးသားသည့် သတင်းအချက် အလက်ကို မူရင်းအတိုင်း မျဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
တစ်ခါသုံး ၀ါးတူများသည် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် မသုံးစွဲသင့်ဟုဆို
အလွယ်တကူ ရယူ သုံးစွဲနေကြသည့် တစ်ခါသုံး ၀ါးတူများသည် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် မသုံးစွဲ သင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းမှ အသင်းဝင် ဒေါ်ရီလွင်ကျော်ဇောက ၁၅-၃-၂၀၁၃ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ “ကျွန်မတို့ အသင်းက ပြည်သူတွေ စားသုံးဖို့ မသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အမြဲ လေ့လာ စစ်ဆေးနေပါသည်။ အခု နောက်ဆုံး စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုရင် ၀ါးတူတွေမှာ မှိုတွေ ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀ါးတူ တော်တော်များများက ပေါင်းမထားပါဘူး။ ၀ါးပင်ကို ခုတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ၀ါးကိုပဲ အဆင်ပြေသလို အချောသတ်ပြီး သုံးတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ငါးရက်လောက်ဆိုရင် မှိုတွေက မမြင်ရပေမယ့် ရှိနေပါပြီ။ ဒီတော့ မှိုပါတဲ့ တူကို သုံးမိတဲ့အတွက် မှိုတွေကို စားသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အသည်းကင်ဆာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တတ်နိုင်ရင် ၀ါးတူကို မသုံးဘဲ သစ်သားတူ၊ စတီးတူတွေကိုပဲ သုံးသင့်တယ်။ ပလတ်စတစ်တူကျတော့ အပူနဲ့ တွေ့ရင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ရှောင်သင့်တယ်” ဟု ယင်းက ပြောကြားသည်။ အခြား ပြည်ပနိုင်ငံများသည် ၀ါးများကို သေချာပေါင်းခံပြီးမှ ၀ါးတူဖြတ်စက်ထဲသို့ ထည့်လေ့ရှိပြီး ပြည်တွင်းမှ ၀ါးတူများသည် ပေါင်းခံခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ ဈေးကွက်တွင် သုံးနေသော တစ်ခါသုံး တူများသည် ဈေးကွက်သို့ ရောက်ရှိရန် အတွက် တူဖြစ်ပြီး ပါကင်ထုတ်ပြီး ၇ ရက်ခန့် အနည်းဆုံးကြာကာ အဆိုပါ အချိန်တွင် မှိုများသည် နှစ်ရက်သားခန့် ရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မှိုများသည် သေးငယ်ပြီး လူမျက်စိနှင့် မြင်နိုင်ရန် ၂၇ ရက် ကြာအောင် စောင့်ရကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ်မသောက်၊ ကွမ်းမစား၊ အရက်မသောက်ဘဲ အသည်းကင်ဆာဖြစ်သူ ပမာဏ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ၀ါးတူ အသုံးပြုမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်)
Posted by winpyaephyo at 4:26 AM
တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးပုံမှန်စားသုံးသောအမျိုးသမီးများသည်ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်
တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးပုံမှန်စားသုံးသောအမျိုးသမီးများသည်ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
အရည်ရွှမ်းသော သီးနှံတစ်ခုဖြစ်သည့် ပန်းသီးသည် ရင်သားကင်ဆာ ကုသရေးအတွက် အလွန်အကျိုးများ
တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးပုံမှန်စားသုံးသောအမျိုးသမီးများသည်ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။သုတေသန ရလဒ်များအရ ပန်းသီးများများစားလေ၊ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားစေသည့်adenocarcinomaအကြိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှု လျော့နည်းလေလေ ဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်များကဆိုသည်။အဆိုပါအကြိတ်အမျိုးအစားကြောင့် ဖြစ်ပွားလာသော ရင်သားကင်ဆာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသေအပျောက်အများဆုံး ရင်သားကင်ဆာ အပြင်းစားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခရီဟိုင်လျူက ကြွက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုအရ ထိုအကြိတ်များသည်ပန်းသီးများများစားပေးသည့်ကြွက်များတွင်လျင်မြန်စွာ သေးငယ်ကျုံလှီပြီး လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။ အလားတူ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ လူသားများတွင် (၅၇)ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိနိုင်ကြောင်းလည်း ပါမောက္ခလျူကဆိုသည်။ ၎င်းတို့သည် ရင်သားကင်ဆာ ရောဂါသည်များစွာကိုပုံမှန်ပန်းသီးတစ်လုံးစီ နေ့စဉ်ကျွေးခဲ့ရာ နေ့စဉ်ပန်းသီးတစ်လုံး စားရမည့် ကိစ္စအား ငြင်းဆန်ခဲ့သည့် လူနာအမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် ပန်းသီးစားသည့် အမျိုးသမီးများထက် ကင်ဆာကြိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာမှု (၈၁)ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုလျင်မြန်ကြောင်း ဆရာဝန်များက အတည်ပြုခဲ့သည်။
အရည်ရွှမ်းသော သီးနှံတစ်ခုဖြစ်သည့် ပန်းသီးသည် ရင်သားကင်ဆာ ကုသရေးအတွက် အလွန်အကျိုးများကြောင်း နောက်ထပ်သက်သေများစွာ ရှိနေသေးသည်ဟုလည်း သုတေသီများက ထောက်ခံကြသေးသည်။လေ့လာမှုရလဒ်များအားလုံးတွင်သိရှိလာရသည်မှာအရည်ရွှမ်းသည့်သီးနှံများအားလုံးလိုလိုသည်ကင်ဆာကြိတ်များ ဖြစ်ပွားလာမှုကို တုန့်နှေးသွားစေသည်မှာ အသေအချာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အနက် ပန်းသီးမှာ အသိသာဆုံး သဘာဝဆေးဝါးဖြစ်ကြောင်း ပါမောက္ခလျူက ရှင်းပြခဲ့သည်။
ရင်သားကင်ဆာ ရောဂါသည်အမျိုးသမီးများတွင်သာမကအမျိုးသားအချို့တွင်လည်း ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (၁)သန်းခန့်သည် အဆိုပါရောဂါ ရရှိလာနေမှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မှဲ့ကင်ဆာအကြောင်း ဖြစ်နိုင်ရင် ရေးပေးပါ ဆရာ။
ကင်ဆာ) ဆိုတာ နေရာတကာမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အရေပြားမှာ ဖြစ်တာထဲက ရှားပေမဲ့ အဆိုးဆုံးက Melanoma မှဲ့ကင်ဆာ။ မှဲ့ဟာ အရောင်၊
အရွယ်၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အပြော့-အမာ ပြောင်းတာနဲ့ (ကင်ဆာ) ဖြစ်ဘို့ စလာတယ်။ အများဆုံး
တွေ့ရတာက မဲနက်-မဲပြာ အရောင်တွေပါ။ နဂိုက မှဲ့ရှိမနေဘဲ အသစ်လဲ
ကြည့်လိုက်ရင် ညီညီညာညာ မရှိဘူး။
နခမ်းသားကလဲ မတိမကျ-မလှမပရှိတယ်။ အရောင်ကလဲ တညီထဲ မဟုတ်ဘူး။ ကြာလေ ကြီးလာလေ။
ဆိုးပေမဲ့ စောစောသိ စောစောကုရင်ရတယ်။ ကြာလေလေ အထဲရောက် လေလေ
Melanocytes ဆိုတဲ့ အရေပြားကို အရောင်ဖြစ်စေတဲ့ (ဆဲလ်) တွေမှာ
(ကင်ဆာ) လာဖြစ်တာပါ။ အရေပြားမဟုတ်ဘဲ အူ နဲ့ မျက်စိမှလဲ ဒီရောဂါမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
အမျိုးသမီးတွေက ပိုများတယ်။ တနှစ်မှာ လူနာသစ် ၁၆ဝဝဝဝ တွေ့နေရတယ်။ သေဆုံးရသူပေါင်း
တနှစ် ၄၈ဝဝဝ ယောက်ရှိတယ်။ အမျိုးအစားခွဲပေါင်း ၁၃ ခုရှိတယ်။
လေ့လာလို့ သိရတာက အလင်းရောင်ထဲက UV photon ကနေ အရေပြားထဲက အရောင်ကို ဖြစ်စေတဲ့
Chromophore ဆိုတာကို လာထိခိုက်ရာကနေ ဖြစ်ရတာတဲ့။ ဒိနောက်မှာ DNA ဆိုတာ
ထိခိုက်စေတယ်။ DNA Replication ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ပုံမှန်မဟုတ်ရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် နေရောင်ထိမှသာ အရေပြား-မှဲ့ (ကင်ဆာ) ဖြစ်ရတာ မဟုတ်ပါ။
symptoms လက္ခဏာတွေကို ABCDE ဆိုပြီး မှတ်လို့လွယ်အောင် လုပ်ထားတယ်။
• Borders (irregular) နခမ်းသားတွေ မညီဘူး၊
(variegated) အရောင်တမျိုးထဲ မဟုတ်ဘူး၊
• Diameter အချင်းမျဉ်း ၁ လက္မရဲ့ ၄ ပုံ
• Evolving over time အချိန်နဲ့ အတူပြောင်းလဲနေတယ်။
• Elevated above the skin surface အရေပြားမျက်နှာပြင်အထက် ကြွတက်နေရင်၊
Firm to the touch ထိကြည့်ရင် တင်းနေရင် နဲ့
• Growing ကြီးသထက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်
Diagnosis ရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ်သိအောင်
မျက်စိ-လက်နဲ့စမ်းတာတွေအပြင် Excisional skin biopsy အသားစဖြတ်ယူ
မှန်ဘီလူးနဲ့စစ်တယ်။ Lactate dehydrogenase (LDH) စမ်းသပ်နည်းလဲ
Melanoma stages အဆင့်တွေ ခွဲထားတာမှာ -
1. အဆင့် (ဝ) ဆိုရင်
2. အဆင့် (၁) Invasive Melanoma ဆိုရင် Survival ရှင်နှုံး
3. အဆင့် (၂) High Risk Melanoma ဆိုရင် Survival ရှင်နှုံး
4. အဆင့် (၃) Regional Metastasis ဆိုရင် Survival ရှင်နှုံး
5. အဆင့် (၄) Distant Metastasis ဆိုရင် Survival ရှင်နှုံး 9-15%
နေရောင်ထဲက Ultraviolet radiation ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟာ
လက်ညှိုးထိုးရမဲ့ တရားခံ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပေါ် နေကာ Sunscreen တွေမှာ Avobenzone,
Zinc and Titanium တွေပါလို့ UVA နဲ့ UVB ဒီရောင်ခြည်တွေ ရန်ကနေ အတော် ထိရောက်အောင်
ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ Sunscreen ကနေ Melanoma ကိုပါ
ကာကွယ်နိုင်မလား မသေခြာသေးပါ။ အသားအရေညိုစေအောင် Tanning လုပ်တာဟာ အရေပြားကင်ဆာ
ဖြစ်မှာ နည်းစေမယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ Melanomas ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
“အရိပ်တိုချိန် နေပူမထွက်နဲ့” ဆိုတာ ဥပဒေသ ဖြစ်တယ်။ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၃
နာရီအတွက် နေထဲထွက်ရင် မှဲ့-အရေပြား ကင်ဆာဖြစ်ဘို့ အဆိုးဆုံးကာလတွေ
Treatment ကုသဘို့ ခွဲစိတ်တာနဲ့စတယ်။
• “အနာကို ဘေး ၁-၂
စတင်တီမီတာ အရေပြား အကောင်းကိုပါ လှီးထုတ်မယ်၊ မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးမယ်၊
ရေတို-ရေရှည် ဆက်ကြည့်နေမယ်” ဆိုတာ မလွဲတမ်း လုပ်ရတဲ့ ကုသနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နုသေးရင်
အရေပြာအကောင်း နဲနဲသာ လှီးဖြတ်ဘို့ လိုမယ်။
• Melanoma-in-situ အစောဆုံးအဆင့်မှာ
ခွဲရရင် ပျောက်နှုန်း ၇၇-၉၈% အထိရှိတယ်။ တက်စေ့တွေပါ ထုတ်ပေမဲ့ သိပ်အကျိုးမများလှတာ
• High risk melanomas ဆိုတာကို Adjuvant treatment ခေါ်တဲ့
ကုသနည်းမှာ High-dose Interferon ဆေး ၁ နှစ် ကြာပေးတယ်။
Metastatic melanomas ကို X-rays, CT scans, MRIs, PET and PET/CTs, Ultrasound,
LDH testing and Photoacoustic detection နည်းတွေနဲ့ စစ်ဆေးမယ်။
ဆေးဝါးနည်းမှာ သုံးတာက Dacarbazine (DTIC) နဲ့ immunotherapy ကုသနည်းမှာ သုံးတာက
therapy ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင် ကုသနည်း၊
• Cell and Targeted Therapies
Posted by winpyaephyo at 4:24 AM
▂ ▃ ▅ ▆ █ #Ask The Expert █ ▆ ▅ ▃ ▂
If you have any questions on Female Health, please join us on our upcoming Facebook #Ask The Expert Session with Obstetrician and Gynaecologist, Dr Anthony Siow.
►►►Click on the event link to find out more https://www.facebook.com/events/348216025283556
Posted by winpyaephyo at 4:23 AM
နှစ်လိုဖွယ် မိန်း​​က​​လေး​​များ​​၏ ဝစ်လစ်စား​​လစ် ဓာတ်ပုံများ​​ကို ကြည့်​​ရှုခြင်း​​သည် ဦး​​​နှောက်၏ စွမ်း​​​ဆောင်ရည်များ​​ကို တိုး​​မြှင့်​​​ပေး​​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။ သု​​တေသီများ​​က Page 3မှ လှပ​​သော ​​လေဆီ၊​ ကီလီနှင့်​​ ရီအန်တို့​​ကဲ့​​သို့​​ ​​မော်ဒယ်မိန်း​​က​​လေး​​များ​​၏ အဝတ်ဗလာ ဓာတ်ပုံများ​​ကို ပြသြပီး​​ စမ်း​​သပ်ချက်အရ ဦး​​​နှောက်၏ စွမ်း​​​ဆောင်ရည်ကို လှုံ့​​​ဆော်​​ပေါ်နိုင်​​ကြောင်း​​ ​​ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​သည်။ဦး​​​နှောက်၏ လျှပ်စစ်ဇီဝ စီး​​ဆင်း​​မှုများ​​သည် လှပ၍ ကြည့်​​​ကောင်း​​​သော မိန်း​​က​​လေး​​၊​ ​​ယောကျာ်း​​​လေး​​ ဓာတ်ပုံများ​​ကို မြင်ရသည့်​​အခါ ပိုမိုတုံ့​​ပြန်မှု မြန်လာတတ်​​ကြောင်း​​ သိရသည်။ အကယ်၍ ဓာတ်ပုံထဲတွင် ပါ​​သော မိန်း​​က​​လေး​​များ​​ကို ​​ရေကူး​​ဝတ်စုံနှင့်​​ပုံ၊​ သို့​​မဟုတ် အဝတ်အစား​​ အပြည့်​​အစုံနှင့်​​ပုံများ​​ဖြင့်​​ ပြသပါက ဦး​​​နှောက်၏ တုံ့​​ပြန်မှုသည် အဝတ်မပါ​​သော ပုံများ​​တွင် မြင်ရချိန်ထက် ၀.၂ စက္ကန့်နှောင့်​​​နှေး​​​နေတတ်​​ကြောင်း​​ ​​ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​သည်။ဖင်လန်နိုင်ငံ တမ်ပီရီ တက္ကသိုလ်မှ ပ​​ရော်ဖက်ဆာ ဂျာရီဟီတာနန်က “ကျွန်​​တော်တို့​​ရဲ့​​ အချက်အလက်​​တွေက အမြင်အာရုံရဲ့​​ နှိုး​​ဆွမှုဟာ ဦး​​​နှောက်ကို သက်​​ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပထမဆုံး​​အကြိမ် လက်​​တွေ့​​ပြနိုင်ခဲ့​​ပါတယ်။ အထူး​​သဖြင့်​​ လိင်နဲ့​​ဆိုင်တဲ့​​ လှုံ့​​​ဆော်မှုဟာ ဦး​​​နှောက်ရဲ့​​ တွက်ချက်မှု မြန်နှုန်း​​ကို သိသိသာသာ ဆက်စပ်သွား​​တယ်ဆိုတာ မြင်ခဲ့​​ပါပြီ”ဟု ​​ပြောကြား​​သွား​​ခဲ့​​သည်။
Posted by winpyaephyo at 4:22 AM
ပန်းသီး၏ ကျန်းမာရေး စွမ်းပကား
တစ်နေ့မှာ ပန်းသီး တစ်လုံး စားရင် ဆရာဝန် နဲ့ ဝေးဝေးမှာ နေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုး စကား ရှိပါတယ်။ ပန်းသီးဟာ အရသာလည်း ရှိလှသလို ကျန်းမာရေး နဲ့ လည်း ညီညွတ်မှု ရှိတာကြောင့် ပန်းသီး ကနေ ရရှိ နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ အကြောင်း လေ့လာထားတဲ့ တွေ့ရှိချက် အသစ်တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။
အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ခြင်း
ပန်းသီးမှာ ကွာစီတင် လို့ ခေါ်တဲ့ အစွမ်းထက် အင်တီ အောက်ဆီးဒင့် ပါဝင် နေတာကြောင့် ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ ပျက်စီး ထိခိုက်မှုက နေ ကာကွယ် ပေးနိုင် ပါ တယ်။ ပန်းသီး စားတဲ့ အခါမှာ ပန်းသီး အခွံကိုပါ စားပေးသင့် ပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ ပန်းသီးအခွံ မှာ ရောဂါကို တွန်းလှန် ပေးနိုင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ အများကြီး ပါဝင် နေလို့ ပါပဲ။
အူမကြီး ကင်ဆာကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ခြင်း
ပန်းသီးတွေထဲ မှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝ အမျှင်ဓာတ် ဟာ အူမကြီးထဲ ကို ရောက်ရှိတဲ့ အခါ ကင်ဆာဆဲလ် ဖြစ်ပေါ်မှုကို တွန်းလှန် ပေးနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေ ထွက်ရှိ စေပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း
နေ့စဉ် ပန်းသီး တစ်လုံး စားတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေ မှာ သွေးတိုး ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျမှု ရှိတာကို လတ်တလော လေ့လာမှု တစ်ရပ် အရ သိရ ပါတယ်။
Posted by winpyaephyo at 4:19 AM
#Awakening the Appetite:Breakfast - Blueberry and Banana Oatmeal with Lemon Crema
The bursting freshness of blueberries paired with bananas is classic and the addition ofazesty lemon cream makes the whole dish sparkle.
1 punnet fresh blueberries (about 150g)
• Combine the oats, water and salt together inasaucepan, and bring toaboil. Turn down the heat toagentle simmer, and cook for5minutes, stirring occasionally. Remove from the heat.
• Wash and pick through the blueberries, discarding any that appear bruised or damaged. Make sure that you dry the blueberries thoroughly. Set them aside.
• Peel the banana and cut into4equal parts and slice each part into5slices. Set them aside.
• To make the lemon crema, combine the lemon zest and double cream inasmall bowl, and whisk until slightly thickened.
• To assemble, take4medium bowls and add the warm oatmeal to each. Scatter the blueberries and bananas over the top of the oatmeal. Placeagenerous dollop of the lemon crema on top of each and serve.
Everything, except the preparation of the oatmeal, can be done in advance and assembled as soon as the oatmeal has been cooked.
Posted by winpyaephyo at 4:17 AM
#A-Z of healthful ingredients: Zucchini
Zucchini together with acorn squash and other members of the squash and pumpkin families, zucchini contain loads of anti-cancer carotenoids, particularly beta-carotene. These foods are all naturally sweet, easy to eat and digest, and are versatile. Mash, make into soup, bake or stir-fry; take your pick.
Posted by winpyaephyo at 4:16 AM
ကင်ဆာဟာ လူနေမှုစရိုက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လူနေမှုစရိုက်ဆိုတာမှာ လိင်ကိစ္စဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုပါ။ လိင်ကိစ္စစရိုက်ကလည်း အခုခေတ်မှာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ ကင်ဆာ ပတ်သက်နေတာမှာ အထင်ရှားဆုံးသော ဥပမာကတော့ “အေ့ (ဒ) (စ်)” AIDS ရောဂါပဲ။
ဒီရောဂါမှာ “ကာပိုစီဆာကိုးမား” လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားကင်ဆာ အဖြစ်များတယ်။ ကာပိုစီဆာကိုးမားကတော့ အရင်က အင်မတန်ရှားတဲ့ အရေပြားကင်ဆာ တစ်မျိုးပါ။ “အေ့ (ဒ) (စ်)” ပေါ်လာကာမှ တော်တော်လေး တွေ့လာရတာ။
"အေ့ (ဒ) (စ်)” ကတော့ လိင်တူ (ယောက်ျားအချင်းချင်း) ဆက်ဆံသူနဲ့ အခြားလိင်တူ မဟုတ်ပေမယ့် လူများများနဲ့ ဆက်ဆံသူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။"
အခုခေတ်အခါမှာ လိင်ကိစ္စမှာ လျော့ရဲပြီး စည်းလွတ်လာကြတော့ ဟိုတစ်ခေတ်တစ်ခါကလို တစ်လင် တစ်မယား သစ္စရှိရှိ တစ်ဦးတည်းနဲ့ သေတစ်ပန်သက်တစ်ဆုံး ဆက်ဆံသူဦးရေဟာ လျော့လာပြီ။ ဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပိုဆိုးတယ်။ ခေတ်ဆန်လာတာနဲ့အတူ စာရိတ္တအဆင့်အတန်းကလည်း ကျဆင်းလာတော့တာပဲ။
အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးနေလို့ မရတော့ဘူး။ အာရှနဲ့ အခြား “ခေတ်မီ” နိုင်ရေးအတွက် စိုင်းပြင်းနေကြတဲ့ စီးပွားရေးတက်သစ်စနိုင်ငံတွေမှာလည်း စာရိတ္တခြစားမှုဟာ တစ်နေ့တခြား ဆိုးနေပါပြီ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နောက်ကင်ဆာကတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာပဲ။
ဒီကင်ဆာဟာ ဗိုင်းရပ် (ပ်) တစ်မျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာတော့ သိပြီးကြပြီ။ ဒီမှာလည်း တစ်ဦးတည်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အတွဲခပ်များများနဲ့ ဆက်ဆံသူ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
သားမွေးမှုနဲ့ ကင်ဆာ ပတ်သက်နေပုံကတော့ ကလေးနည်းတဲ့သူတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာ ပိုအဖြစ်များပြီး ကလေးများများမွေးခဲ့တဲ့ မိခင်တွေမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ပိုဖြစ်တယ်။
Credit to - ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ခင်
B.A (Rgn), M. B. B. S (Rgn)
F. R. C. P (Edin)
Posted by winpyaephyo at 4:12 AM
ယောမြို့စားအတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင်ရဲ့နာမည်ကျော်ဥတုဘောဇန သင်္ဂဟကျမ်းမှာ ဖော်ပြထားတဲံ့ ရေနွေး။ရေကျက်အေး ရေအေးတို့နဲံပတ်သက်တဲ့ သိမှတ်ဖွယ်ရာဗဟုသုတတွေဒီစာအုပ်မှာ ပါဝင်တယ်. နောက်ဆုံးတင်ပြလိုတာကတော့.....
(၃) ဓာတ်ဗူးထဲက ရေနွေးနဲံဖျော်ရင် ခြောက်နာရီထက်ကျော်ပြီး ဓာတ်ဗူးထဲမှာ လှောင်ထားသော ရေနွေးကိုမသုံးသင့်ပါ။
(၄)ဓာတ်ဗူးထဲမှာ အေးပြီးသားရေနွေးကို ဓာတ်ပျက်ရေနွေးဖြစ်လို့ ပြန်နွေးပြီး မသုံးပါနဲံ။ပြန်ကျိုချက်ပြီး မသုံးပါနဲ့။
(၅)ညသိပ်ရေနွေး ။ရေနွေးကြမ်းဟာ အဆိပ်ဖြစ်လို့ အစာအိမ်ကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၆)ရေနွေးသောက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ ရေအေးမသောက်ပါနဲ့။ ရေအေးသောက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ ရေနွေးမသောက်ပါနဲ့။ အထက်ပါအယူအဆတွေဟာ မလွဲနိုင်တဲံ့ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဥပဒေသ အယူအဆတွေဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။.
Posted by winpyaephyo at 4:09 AM
ကင်းပုံ(Wild Snake Gourd )ပင် နှင့်သူ၏အသုံးဝင်ပုံများ
: မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလေ့ကျပေါက်သည်။ သစ်ပင် ခြံစည်းရိုးတို့တွင်လည်း ပေါက်လေ့ရှိသည်။
အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင်
Posted by winpyaephyo at 4:04 AM
ဟင်းနုနွယ်ရွက်-- က ကင်ဆာပိုင်ရှင်များအတွက်ကောင်းသည်။
Posted by winpyaephyo at 4:03 AM
ခံတွင်း ကင်ဆာ ၏ ဆိုးကျိုးများ
မေး- မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ် များလာတဲ့ ခံတွင်းကင်ဆာ ရောဂါ အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးပါဆရာ။
ဖြေ- ကင်ဆာ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ အတိအကျ ဘယ်သူမှ မသိဘူးပေါ့။ ကင်ဆာ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက အများကြီး ရှိတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုက ကင်ဆာဖြစ် တဲ့နေရာပေါ် မှာ မူတည်ပြီးတော့ အကြောင်းအရင်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လုံးဝကွဲပြားခြား နားသွားတယ်။ ခံတွင်း ကင်ဆာ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ ဆိုတာ တိတိကျကျ မသိပေမယ့် လည်း ဖြစ်နိုင်ချေများ တာတွေကို ပြောပြမယ်။ ဥပမာ- ကွမ်းစားရင် ကင်ဆာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ကွမ်းစားတဲ့ သူတိုင်း ဖြစ်ရမှာပေါ့။ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကွမ်း အများကြီး စားပြီးတော့ ခံတွင်းကင်ဆာ မဖြစ်တဲ့သူလည်း ရှိတာပဲ။ ခံတွင်း ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြိုတင် ကာကွယ်မလဲ၊ မေးခွန်းကို ဖြေရရင် ကွမ်းမစား ပါနဲ့၊ ဆေးလိပ် မသောက်ပါနဲ့၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အရက် လည်းမသောက်ပါနဲ့။ ဘယ်လိုမှ မရရင်လည်း အရက်ကို လျှော့သောက်ပါ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောမှာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို စစ်တမ်း ကောက်ယူလိုက်တဲ့ အခါ ကျတော့ ၈ဝရာခိုင်နှုန်း၊ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းက ကွမ်းစားတဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁ဝရာခိုင်နှုန်းက ကွမ်း မစားတဲ့ သူတွေ ပါကောင်းပါနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းအရင်း တစ်ခု တည်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့တော့ ပြောလို့ မရပေမယ့် ကွမ်းစားရင် နံပါတ် တစ် ထုံးထည့်မယ်။ ကွမ်းသီး ထည့်မယ်။ အဲဒီမှာတင် ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ပေါင်း ပါနေပြီ။ ဒါ့အပြင် ကွမ်းကို ကွမ်းသီး ၊ထုံးနဲ့ စားတဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဆေးရွက်ကြီးတွေလည်း ထည့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် မေးရိုးနဲ့ ခံတွင်း ဆေးပညာ ဌာနမှာတော့ လေ့လာ မှုတွေ လုပ်ထားတာပေါ့။ အိန္ဒိယ ကလာတဲ့ ဆေး ပစ္စည်းမျိုးစုံတွေ။ ဆစ်ကနယ်တို့၊ နံပါတ် ဘယ်လောက်တို့၊ ၁ဝဝတို့ ၂ဝဝတို့ ၉၄ တို့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။ အဲဒီ ဆေးတွေ ထဲမှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်း တွေ အများကြီးပါတယ်။ ကွမ်းစား တယ်ဆိုတာ ကွမ်းလို့ပြောပေမယ့် ကွမ်းရွက်ချည်းပဲ စားတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်၊ ကွမ်းနဲ့ တွဲပြီးတော့ ဆေးတွေ ကပါတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခံတွင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ရခြင်း အဓိက အကြောင်းရင်းက ဘာလဲလို့ မေးရင်တော့ ကွမ်းစားတာပဲလို့ ဖြေ မှာပေါ့။ နောက်တစ်ချက် က ဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီဆေးလိပ်ကို မီးရှို့တာပဲ၊ ဒီဆေးရွက်ကြီးကို မီးရှို့တာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီဆေးရွက်ကြီးကို မီးရှို့ပြီး ထွက်လာတဲ့ ဓာတ် ပေါင်းတွေဆေးလိပ်က အစီခံပါတယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒါကလည်း အငွေ့ထွက်တယ်။ အငွေ့ရဲ့ အပူရှိန်လည်း ရှိတယ်။ အပူဓာတ် ကလည်း ဖြစ်စေတာ ပါပဲ။ တချို့နေရာတွေမှာ ဆိုရင် ဆေး လိပ်ကို ဖယောင်းသုတ်တယ်။ ပြောင်း ပြန်သောက်တယ်။ မီးပါတဲ့ အပိုင်းကို ပါးစပ်ထဲမှာ ထားပြီးတော့ အစီခံ အပိုင်းကနေ အငွေ့ကို အပြင်မှုတ် ထုတ်တယ်။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေမှာ ကင်ဆာ အဖြစ်များတယ်။ မီးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းက အပူတွေ အာခေါင်နဲ့ တအား နီးနေတယ်။ အဲဒီတော့ ဆေး လိပ်သောက် တယ်။ ကွမ်းစား တယ်ဆို တာ ဒွန်တွဲတာက တစ်ကြောင်း၊ ဆေး လိပ်သောက်တာ ဒွန်တွဲသလို အရက် သောက်တာ ဒွန်တွဲတာ။ အဲဒီအ ကြောင်းရင်း ၃ချက် ကတော့ ခံတွင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ရခြင်း အဓိက အကြောင်းရင်းတွေ ချည်းပါပဲ။ တစ်ခါတလေ နေရောင်ခြည် ပူပူထဲ မှာထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ လယ်သမားတွေ ခံတွင်းကင် ဆာဖြစ်နိုင် တယ်။ ခံတွင်း ကင်ဆာက ဘာအဖြစ်များလဲ ဆိုတော့ အောက်နှုတ်ခမ်း။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ရှိတဲ့အခါကျတော့ ကင်ဆာကို ဖြစ်စေတယ်။ ဘယ်နေရာကို အထိ ဆုံးလဲ ဆိုတော့ နေရောင်ခြည် အပေါ် က လာတဲ့အတွက် အောက်နှုတ်ခမ်း အဖြစ်များတာ။ အဲဒီတော့ မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြစ်နည်းတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတယ်။ အဲဒီတော့ ယောက်ျားလေး တွေ၊ တောင်သူ လယ်သမားကြီးတွေ ဆိုလည်း အနည်းဆုံးတော့ နှုတ်ခမ်း နီလို၊ အလှဆီ လို ဆိုးသင့်တယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အလှဆီ လိမ်းထားတယ် ဆိုရင် ဒါကို သက်သာစေတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ လည်း ဆိုင်တယ်။ နောက်တစ် ခုကတော့ ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့ ခုနက အမူအကျင့် လေးတွေကိုရှောင်ပါ။ အသီးအရွက် ကို များများစားပါ။
မေး- ခံတွင်း ကင်ဆာရောဂါ အကြောင်းကို လူတိုင်းသိအောင် ဘယ် လို လုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။
ဖြေ- ပြည်သူပြည်သားတွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာက အရင်ထက်စာ ရင် အခုက ပိုပြီးရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ ပြည်သူလူ ထုတွေ ကျန်းမာရေး အသိ ပိုရှိလာတယ်။ အခုကလူတွေရဲ့ လိုက်ဖ် စတိုင် ပြောင်းလဲသွားတာ။ ဒီဟာတွေ က ကင်ဆာရောဂါ တိုးပွားလာစေ တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ပိုဖြစ်စေ တယ်။ ကင်ဆာရောဂါ ဟာ သာမန် ဆိုရင် စစချင်းဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ မနာ ဘူး။ လူတွေက ခံစားရတယ် ဆိုတာ နာတာ ကိုခေါ်တာပဲ။ နာမှ သူကပြ မှာ။ အဲဒီလို နာတာပြတဲ့ အချိန် ကင်ဆာရောဂါက လွန်နေပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကုသတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ ကုသလို့ရှိ ရင် မကုသတာ ထက်စာရင်တော့ အများကြီး ပိုကောင်းတယ်။ အမြဲ တမ်း ကျန်းမာရေး အသိရှိရင် ခံတွင်း ရယ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ တခြားနေရာ ကိုယ်ခန္ဓာ စစ်ဆေးမှု အပိုင်းတွေကို မှန်မှန် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်ခါစ အချိန်ကို ကြိုတင် သိနိုင်မယ် ဆိုရင် လုံးဝ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသ နိုင်မယ့် အခြေအနေ မျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ လည်း အပါအဝင်ပဲ။ ခံတွင်း ကင်ဆာ က အ ခြား ကင်ဆာတွေ ထက် ပိုပြီး အ ခြေအနေကောင်းတယ်။ သူကမြင် သာထင်သာတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ရတာ ပိုလွယ်တာပေါ့။
အခု ပညာပေး အစီအစဉ်လေး တွေတော့ မြန်မာနိုင်ငံ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် အသင်းက ဆွဲနေတယ်။ ခု မြန်မာပြည်မှာ သွားဘက် ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေ အရင်တုန်း က ရာ ဂဏန်းရှိတယ်။ အခု ၃ဝဝဝ လောက်ရှိသွားပြီ။ ဒီအင်အားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသုံးချနိုင် ရင် ကောင်းတယ်။ လူဦးရေ သန်း ၆ဝ ကို တစ်ခါ တည်း ပညာပေးဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ ဆင့်ပွားပညာပေး သင်တန်းပေါ့။ ကျွန်တော် တို့တစ်တွေ က သွားဆရာဝန် တွေကနေ တစ်ဆင့် ဘယ်သူတွေကို အသုံးချမလဲ။ ဥပမာ- တောတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေက သူနာပြုတွေကို ထပ်ဆင့် သင်တန်းပေးမလား၊ တောမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို သင်တန်းပေးမလဲ၊ သူတို့တွေ ကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ လူဦးရေ သန်း ၆ဝ ကို တစ်ခါတည်း တရား သွားဟောပေါ့။ ဒါမျိုးကတော့ မဖြစ် နိုင်ဘူး။ အခါအားလျော်စွာ သွား ဆရာဝန်တော်တော် များများက တာဝန်ဆောင်ရွက်မယ်၊ ဆင့်ပွားပေး နိုင်မယ့် သင်တန်းတွေ လိုပါတယ်။ နံပါတ်တစ် ကတော့ စီမံချက်ဆွဲ ဖို့လိုတယ်။ နံပါတ်နှစ်ကတော့ သင်တန်းတွေ ဖွင့်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီတော့ သွားဆရာဝန်တွေကို အားကိုး ရမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ကြည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကလည်း လိုမှာပဲ။ မြို့နယ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေ နဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှု ဆိုတာ ငွေရေး၊ကြေး ရေးလို့တော့ မဆိုလိုပေမယ့် တခြား နည်းနဲ့ နိုင်ငံတော် ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက လိုပါ တယ်။ ဒါမှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့က လူတွေ တော်တော်များများကိုပေါ့လေ၊ အားလုံး မဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများ ကို အသိပညာတွေ ပေး လိုက်မယ် ဆိုရင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းက တော့ ကျဆင်းသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက် ခံတွင်း ကင်ဆာရောဂါ အကြောင်းကို တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာ အထိဆောင်ရွက် သွားဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။
မေး- ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုနှုန်းကို လျော့ကျသွားအောင် ဘယ် လိုလုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် အသင်းက ဆရာဝန်တွေ လုပ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာလည်း ကင်ဆာ အမျိုး ပေါင်းရာ နဲ့ ချီပြီးတော့ ရှိကောင်း ရှိမယ်။ အတိအကျတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာ တစ်ကနေ တစ်ဆယ် အထိရေလိုက်ရင် ခံတွင်းကင်ဆာ ပါနေ တယ်။ မြန်မာပြည် မှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒါကပေါ့ပေါ့တန်တန် တွေး လုိ့ရ တဲ့ရောဂါမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘယ်သူမှ ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ် နိုင်ငံကမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ လျော့ပါး သွားအောင်တော့ လုပ်လို့ ရမယ်။ HIV တွေဆိုရင် သေမှာပဲ ဆိုပြီး၊ ဒါကို မသေအောင် တချို့နိုင်ငံ တွေမှာ လုပ်နေကြပြီ။ လျော့သွား အောင် လုပ်နေကြ ပြီ။ ဒီလိုပဲပေါ့။ ကျွန် တော်တို့ကလည်း ခံတွင်းကင်ဆာ လျော့အောင် လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေပါပြီ။
ကျွန်တော်က ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောရရင် သစ်တောတွေ ခုတ်တာတို့၊ မလိုအပ် ဘဲ သစ်ပင်တွေ ခုတ်တာတို့၊ စက်ရုံ တွေက စွန့်ပစ် ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်တာတို့ ဒါတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အများကြီး ပျက်စီး စေပါတယ်။ နောက်ဆုံး လွယ်လွယ် လေးပြောရရင် ဆေးလိပ်ကို နေရာ တကာသောက်တာ တို့၊ အခု နိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း လုပ်နေတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာနတွေက လည်း လုပ်နေတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ NGO တွေကလည်း လုပ်မယ်။ ဆေးလိပ် မသောက်ရေး၊ ဘယ်သူမှ ဆေးလိပ် မသောက်ရဘူး။ ဆေးလိပ် သောက်ရင် အရေးယူမယ် ဆိုတာမျိုး ဥပဒေတော့ ထုတ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း ဆေး လိပ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတ်မှတ် ထားတာတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော် က ဒီလို သတ်မှတ် ထားတာတွေကို လိုက်နာအောင် အသိပညာ ပေးဖို့ အစိတ်အပိုင်းက ပို အရေးကြီး မယ် လို့ ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ထင်တယ်၊ တချို့က ဆေးလိပ် မသောက်ရလို့ ရေးထား ပေမယ့်လည်း သောက်ချင်သောက် နေတာပဲ။ အဲဒါမျိုးတွေ ကိုတော့ ကျွန် တော် တို့က ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ မရဘူး။ မသောက်ရဘူး ဆိုရင် အဲဒါမျိုး နေရာမှာ မသောက်ကို မသောက်ရ ဘူး။ ကွမ်းတံတွေး မထွေးရဆိုရင် လည်း ထွေးနေတာပဲ။ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ ကွမ်းစားတာကို ကွမ်းမစားရဘူး ဆိုပြီးတော့ ဥပဒေ ထုတ်လို့ ရမယ်မထင်ဘူး။ ကွမ်းက ပိုဆိုးတာက မြန်မာပြည် အနှံ့ ယဉ် ကျေးမှု ဓလေ့ထဲမှာလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဟာရဲ့ မကောင်းတဲ့ဆိုး ကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆို တာကို တစ်ဖက်က ပညာပေး သွားရ မှာပေါ့။ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာကတော့ ကောင်း တဲ့ အမွေ အနှစ်ကို ထိန်းသိမ်း ထားပြီး မကောင်းတဲ့ အမွေအနှစ်ကိုတော့ ဖယ်ရှားသင့်ရင် ဖယ်ရှားရမှာပေါ့။
မေး- ခံတွင်းကင်ဆာ အကြောင်းကို အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ဆရာ။ အခုနောက်ဆုံး ခံတွင်း ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ဆရာ့ရဲ့ အကြံ ပြုချက်များကို ပြောကြားပေးပါ ဆရာ။
အဓိက အရေးကြီး တာကတော့ ခုနကပြောတဲ့ မကောင်းတဲ့ အမူ အကျင့်တွေ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အမူအကျင့်၊ ကွမ်းစားတဲ့ အမူအကျင့်၊ ဒါတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မသောက် အောင်၊ မစားအောင်၊ စားနေတယ် ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဆရာ ဘယ်လိုမှတော့ ဖြတ်လို့ မရဘူးပေါ့။ ဖြတ်လို့ မရရင် လျှော့ ပါဆိုတဲ့ဟာ မျိုးလေး။ နောက်ပြီးတော့ Life Style ပေါ့။ အစားအသောက် ရော၊ လေ့ကျင့်ခန်းရော၊ အဲဒါလည်း ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း ဆိုတာက လည်း Life Style မှာ အရေးပါတာ ပဲ။ ငယ်ရင် ငယ်သလို၊ ကြီးရင်ကြီး သလို သူ့အတိုင်းအတာ နဲ့သူ လုပ်ဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ရာထူး၊ တာဝန်တွေ အားလုံး နားလိုက်ပြီ။ နားလိုက်ပြီ ဆိုပေမယ့် အခုအချိန်ထိ ဆေးခန်း ဖွင့်တယ်။ ဒီပညာနဲ့ပဲ အ လုပ်လုပ်နေတဲ့ အတွက် ဒီသွား ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာကို ဘယ်ရှုထောင့် ကပဲဖြစ်ဖြစ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ နေရာက ပံ့ပိုးပေးမှာပါ။ ဆေးပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားဖို့၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင် ပေါင်တန်းနိုင် ဖို့၊ ခံတွင်းကင် ဆာ ရောဂါတွေကို Plan တွေချပြီး ကာ ကွယ်ဖို့ ပြည်သူလူထု အတွက် အကျိုး ရှိမယ့် ဟာတွေကိုကျွန်တော် တတ်နိုင် တဲ့ဘက်က ပါဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဘမြင့် (ပါမောက္ခ၊ငြိမ်း) ကို အဖမစ္စတာအာရ် စီပေါလ်-အမီမစ္စစ်ပီဘီပေါလ် တို့က ပုသိမ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဆရာ ဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဘမြင့် [B.D.S (Pb), Ph.D(Japan), F.I.C.D, F.I.C.C.D.E] သည် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် အသင်းတွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ Dent Myanmar Dental Centre တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။
Posted by winpyaephyo at 4:01 AM
Posted by winpyaephyo at 4:00 AM
ကွန်ဒုံးမဆောင်ရဲခြင်းကြောင့် HIV / ADIS ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားနိုင်
ကွန်ဒုံးများအား သက်သေအဖြစ် အသုံးပြု၍ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးများ ကိုဖမ်းဆီမှု များ ကြောင့် မြန်မာနို င်ငံ တွင် HIV / AIDS ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း ပိုမို မြင့်မား လာနိုင်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့မှ ဥပဒေ အကြံပေး အကျိုးဆောင် တစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း သိရသည်။
ကွန်ဒုံးများကို သက်သေအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ် မဖမ်းဆီးရန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန နှင့် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ အချိန်အထိ ဖမ်းဆီး နေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင် နေသူများ ကွန်ဒုံး မသုံးဆောင်ရဲကြ သဖြင့် HIV / AIDS ကူးစက် ခံရမှု ပိုမို များပြား လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း မမြင့်မား စေရန် နယ်မြေ ဒေသ အသီးသီးတွင် ပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း များကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း နှင့် HIV / AIDS ရောဂါ မကူးစက် နိုင်စေရန် ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြု သင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ မှ ဒေါက်တာ စည်သူ ကပြောကြား သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် HIV / AIDS နှင့် ပတ်သက်၍ WHO မှ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း HIV ကူးစက်သူ ဦးရေ ၂၄၀၀၀၀ ၊ AIDS ဖြစ်ပွားသူ ဦးရေ 120000 နှင့် HIV / AIDS ကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေ ၁၅၀၀၀ ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by winpyaephyo at 3:57 AM
ဟိန်းခိုင်ထွန်း၊ ၊လိင်ဆက်ဆံ မှု မှာ ပါးစပ် နဲ့လုပ်တာ ကို ရှောင်ကျဉ် ဖို့အိုဟိုင်းယို
ပြည်နယ် တက္ကသိုလ် ကင်ဆာနှင့် ကူး စက်ရောဂါ ပိုးမွှား များ လေ့လာမှု သုတေသန ဌာန က
သတိပေး ချက် ကို Wall Streetဂျာနယ် မှာ ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။
ဒီတက္ကသိုလ် က ကင်ဆာ သု တေသန မှုး တစ်ဦး ဖြစ်သူ မော်ရာ ဂီလီဆင် က ပါးစပ် နဲ့လိင်ဆက်
ဆံ တာ ဟာ အမျိုးသား တွေ ထက် အမျိုးသမီး တွေ က ပိုပြီး ပြု မူတတ်ပြီး အစာရေမြို ကင်ဆာ
လည်ချောင်း ကင် ဆာ နဲ့သားအိမ် ကင်ဆာ ရရှိ မှု တွေ မှာ လည်း အမျိုးသမီး တွေ က အဖြစ်
အများ ဆုံး လို့မော်ရာ ဂီလီဆင် က ပြောပါတယ်။
အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု မှာ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့ နမ်းစုတ် ခြင်း အလေ့အထ ရှိတာ ကြောင့်
ကူးစက် ရောဂါ ပြန့် ပွား ဖို့က ပို လွယ်တယ် လို့တက္ကသိုလ် က လေ့လာ ချက် မှာ ဖော်ပြထား
ပါးစပ် နဲ့လိင်ဆက် ဆံ မှု ဟာ သမရိုးကျ လိင်ဆက်ဆံ မှု ထက် ပေါ်ပြူလာ ပို ဖြစ်လာတာ ဟာ
မိန်းကလေး တွေ အတွက် တစ်ချိန် မှာ ကင်ဆာ ရဲ့သားကောင် ဖြစ်သွား နိုင် ကြောင်း ကို မိုင်
ယာမီ ကင်ဆာ ရောဂါ လေ့လာ ရေး ဌာန က လည်း သတင်း ထုတ် ပြန် ထား ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စု နှစ် တွေ အတွင်း မှာ လည်ချောင်း ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ရင် ဆေးလိပ် နဲ့တခြား
ရောဂါ ပိုးမွှား တွေ ကြောင့် လို့လက်ခံ ထား ကြ ပေမယ့် ဆေးလိပ် လည်း သောက် ၊ ပါးစပ်
နဲ့ လည်း ကာမ ဆက်ဆံ တဲ့ သူ တွေ ထဲ က လည်ချောင်း ကင်ဆာ ရောဂါ ခံစား နေရာသူ
တွေ ကို လေ့လာကြည့် တဲ့ အခါ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက အစာသွင်း လမ်းကြောင်း ကနေ လိင်ဆက်
ဆံ လို့ရရှိ တာ ဆို တဲ့ ရလာဒ် ထွက် ပေါ်လာ ပါတယ်။
New England Journal of Medicine က တွေ့ ရှိ ချက် အရ အသက် ၂၀ ကျော် ကနေ ၃၀
ကျော် အရွယ် တွေ ဟာ ပါးစပ် နဲ့လိင်ဆက် ဆံတာ ကို ပို သဘောကျ ပြီး ဥရောပ သူ တွေ က
အမေရိကန် သူ တွေ ထက် ဒါကို ပို သဘော ကျတယ်။ လည် ချောင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား မှု မှာ
လည်း ဥရောပ မမ တွေ က ပို များ တယ် လို့သုတေသနအစီရင် ခံစာ မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ကျန်းမာ ရေး ကောင်းသူ တစ်ယောက် ရဲ့ကိုယ်တွင်း က ထွက် ရှိလာ တဲ့ အရည် ဟာ ပြဿနာ
မဟုတ် ပေမယ့် ဒါ ထွက် ရှိလာမယ့် နေရာ တစ်ဝိုက် မှာ မသန့် ရှင်း မှု တွေ ရှိ နေရင် ပါးစပ်ကို
ချက်ခြင်း ကူးစက် တတ်တယ် လို့မော်ရာ ဂီလီဆင် က ထောက်ပြ ပါတယ်။
အမေရိကန် နဲ့ဥရောပ က အထက်တန်း ကျောင်း တွေ မှာ ပါးစပ် နဲ့လိင်ဆက်ဆံ တာ ကို ရှောင်
ရှား ဖို့လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပညာပေး အစီအစဉ် တွေ က နေ ဆော် သြပေး မယ့် အောင်မြင်မှု မရရှိ
၀ါရှင် တန် ပြည်နယ် တာကိုမာ အထက်တန်း ကျောင်းက ကျောင်းသူ လေး အေဒီရိယန်နာ က
သူ ရဲ့ရည်စား နဲ့လိင်ဆက် ဆံ ချင်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန် ရှိလာ မှာ ကြောက်တဲ့ အတွက် ပါးစပ်နဲ့ 
ပဲ သူက နှစ်သိမ့်မှု ပေး ခဲ့ ရတယ်။ သူ ဟာ အခု တော့ သိပ်မစိုးရိမ်ရ သေးတဲ့ ခံတွင်း ကင်ဆာ
ရောဂါ သည် တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
Posted by winpyaephyo at 3:55 AM
Posted by winpyaephyo at 3:52 AM
ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို ဘာကြောင့် ချစ်ကြ တာလဲ ဆိုသောလူ.သဘောသဘာဝများ
ဘာဝ တရားအရ ယောက်ျားတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ သွေးမတော် သားမစပ် တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ ချစ်ကျွမ်း ၀င်ကြပါတယ်။
တချို့ စုံတွဲတွေ က ရုပ်ရည် အသွင်အပြင်၊ ၀ါသနာ၊ စိတ်ဓာတ် စတာ တွေမှာ တူညီ တတ်ကြ ပေမယ့် တချို့စုံတွဲတွေ ကတော့ လားလားမှ မတူဘဲ ကွဲပြား ခြားနား နေတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသွင် စရိုက်တွေ မတူတဲ့ စုံတွဲတွေဟာလည်း အသွင်စရိုက် တူတဲ့ စုံတွဲတွေ လိုပဲ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေ နေတတ် ပါတယ်။
ဘ၀အဖော်ကို ရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောနိုင်တဲ့ အချက် တစ်ခု ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက် ထဲမှာ သဘောကျတာနဲ့ သဘော မကျတာ စတာ တွေကို သိုလှောင် မှတ်သား ထားတဲ့ သတင်း အချက်အလက် အုပ်စု ရှိနေတာ ပါပဲ။ ဒါကို အချစ်မြေပုံလို့ တင်စားချင် ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ ဆံပင် အရောင်၊ မျက်လုံး အရောင်၊ အသံ၊ ကိုယ်နံ့၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံ ပန်း သဏ္ဌာန် စတာတွေ ပါဝင်နေ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ကို ဆွဲဆောင် နိုင်စေမယ့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အမျိုး အစား (ဥပမာ- နွေးထွေး ကြင်နာတဲ့ ပုံစံ မျိုးလား၊ ခင်မင် ရင်းနှီးလွယ်တဲ့ ပုံစံမျိုး လား၊ မာကျောတဲ့ ပုံစံမျိုးလား၊ အေးဆေး တည်ငြိမ်တဲ့ ပုံစံမျိုးလား)ကိုလည်း မှတ်သား ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေဟာ အချစ်မြေပုံက လမ်းညွှန်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ သူကို တွေ့တဲ့အခါ ဘ၀အဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်မိတတ်ကြ တာပါ။
မိခင် နှင့် တူသော ချစ်သူ
အမျိုးသား အများစုရဲ့ ဘ၀အဖော်တွေက သူတို့ မိခင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ တူညီ နေတတ် ပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ လူတွေရဲ့ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟာ မိခင်ဆီက ရရှိတာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကို အချစ် မြေပုံ ထဲမှာ သိုမှီး ထားတာကြောင့် ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ကလေးဘ၀ ကတည်းက မိခင်တွေရဲ့ အထူး ဂရုစိုက်မှုကို ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဘ၀အဖော်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ သဲလွန်စ ပေးတာ ပါပဲ။ မိခင်က နွေးထွေး ကြင်နာပြီး စိတ်ထားကောင်းရင် သူ့သားဟာ အဲဒီလို ကြင်ဖက်မျိုးကို ရရှိနိုင်ခြေ များပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ မိခင်မှာ စိတ်ဓာတ် ကျနေတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှိပြီး အရာရာကို ဆန့်ကျင် တတ်တဲ့ ပုံစံ ရှိခဲ့ရင် သားဖြစ်သူဟာ လက်ထပ်ဖို့ကို ကြောက်ရွံ့ နေနိုင် ပါတယ်။
မိခင်တွေက သားယောက်ျားလေး အပေါ် လွမ်းမိုးမှု ရှိနေသလိုပဲ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အချက် ကတော့ ဖခင်အပေါ်မှာ မူတည် နေပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့အခန်း ကဏ္ဍဟာ သားသမီးတွေ ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပျော်ရွှင်မှု အခွင့်အလမ်းတွေ အပေါ်မှာ အများကြီး အရေးပါနေ ပါတယ်။ မိခင်တွေကသား ယောက်ျား လေးတွေရဲ့ ဘ၀အဖော် အပေါ် ခံစားချက်ကို လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေ သလိုပဲ သမီးတွေရဲ့ အမျိုးသား ရွေးချယ်မှု အပေါ် ခံစားမှုက ဖခင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖခင်က သမီးကို ချစ် ကြင်နာပြီး တန်ဖိုးထားရင် သူ့အနေ နဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှု ရှိနေတတ် ပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ လျစ်လျူရှုမှု ကို ခံရရင်တော့ သူ့ကိုယ်သူ ချစ်စရာ မကောင်းတဲ့သူ လို့ ထင်နေတတ် ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးမည့် သူ
လက်ထပ်တဲ့ အခါမှာ စုံတွဲ အများစုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးမယ့်သူကို ရှာဖွေ လေ့ရှိပါတယ်။ စကားများများ ပြောတတ် တဲ့သူက နားထောင်ပေးမယ့် ချစ်သူကို သဘောကျပြီး စိတ်တို တတ်တဲ့သူက သည်းခံ နားလည်ကာ အကောင်းမြင် တဲ့သူကို ချစ်တတ်ပါတယ်။ စုံတွဲတွေမှာ အများအားဖြင့် လူမှုရေး အခြေအနေ တွေက တူညီ နေတတ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ကျောင်း တည်းနေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ တစ်မြို့တည်း နေသူ တွေ၊ အလုပ်တစ်ခု တည်းမှာ လုပ်ကိုင်ကြသူ တွေက အိမ်ထောင်ဖက်တွေ ဖြစ်သွား ကြတာ ပါပဲ။ တချို့စုံတွဲတွေ ဆိုရင် မိန်းမက စီးပွားရှာပြီး ခင်ပွန်းက အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကာ ကလေးတွေကို ပြုစု ပျိုးထောင်တာမျိုး လည်း ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ တစ်ဦးရဲ့ အားနည်းချက်ကို တစ်ဦးရဲ့အားသာချက်နဲ့ ဖြည့် ဆည်း ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေတာ ပါပဲ ဆိုတာ ဒီ ဇနီးမောင်နှံတွေက သက်သေပြ နေတာပါ။
သူစိမ်း နှစ်ဦးဟာ မြင်မြင်ချင်း ချစ်နိုင် ကြပါ့မလား။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့ဟာ ရုပ်ရည်ချင်း ဆင်ခဲ့ရင်၊ အကြိုက်တူ ခဲ့ရင်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တူခဲ့ရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မြင်မြင်ချင်း တွယ်တာ သွားတတ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာဖတ်ရတာ ၀ါသနာ ပါသူတွေမှာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးရင်း တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သဘောကျ သွားတတ် ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းတရားဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ကို ပူလောင်မှု နဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှု၊ ကြည်နူးမှု ၊ ပြည့်စုံမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်မှု စတဲ့ အချက် တွေကို ပေးစွမ်း နိုင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းတရား အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထား အပေါ် မူတည်ပြီး အရသာ အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းလဲ ခံစားရ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by winpyaephyo at 3:51 AM
Posted by winpyaephyo at 3:49 AM
Posted by winpyaephyo at 3:48 AM
ပုံမှန်လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ရည် သောက်သူတွေဟာ ပုံမှန်မသောက်သူတွေထက် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းကြောင်း တရုတ်အမျိုးသမီး ၆၉၂၈ ဦးကို လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
ရေဆာနေသလား၊ လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည် (Green Tea) တစ်ခွက်လောက် သောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ရေငတ်ပြေစေရုံသာမက အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသား ၉၄၀ ဦးကို လေ့လာမှုအရ လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည် ပိုသောက်ဖြစ်လေလေ၊ သွားဖုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုလျော့ နည်းလေလေဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by winpyaephyo at 3:45 AM
မ ကြာ​သေး​ခင်​က ကြုံ​ခဲ့​ဖူး​တာ တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်။ အသက် ၆​၀ ကျော် မိတ်ဆွေ​သစ်​တစ်​ဦး​နဲ့ ခရီး​အတူ​သွား​ဖြစ်​ကြ​ရင်း ရင်းနှီး​လာ​လို့ သည်​ကိစ္စ​တွေ ပြော​ဖြစ်​ကြ​တဲ့​အခါ သူ​က အမျိုးသမီး​တွေ မ​ပြီး​ဘူး​လား​လို့ တ​အံ့​တ​ဩ မေး​လာ​ပါ​တယ်။ တကယ်​တော့ သူ​ဟာ မြေး​ရ​နေ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့ ကလေး​သုံး​ယောက် ဖ​ခင်​ပါ။ ဒါ​နဲ့ ကျွန်တော်​လည်း သူ့​ကို မေး​မိ​တယ်။ “ဘာ​လဲ အစ်ကို​ကြီး​က အစ်ကို​ကြီး မိန်းမ​ကို ပြီး​လား​လို့ မေး​တတ်​တယ် မဟုတ်​လား”ဆို​တော့ ဟုတ်​တယ်​လို့ သူ​က ဖြေ​ပါ​တယ်။ ဒါ​နဲ့ “ဟို​က​လည်း ခေါင်း​ညိတ်​တယ်၊ ဒါ​မှ​မဟုတ် ပြီး​တယ်​လို့ ပြော​တာ​ချည်း​ပဲ မဟုတ်​လား”ဆို​တော့ သူ​က ဟုတ်​တယ်​တဲ့။ ကျွန်တော့်​မှာ တ​အား ရယ်​ချင်​သွား​ပေ​မယ့် သူ့​ကို​ရော သူ့​မိန်းမ အမယ်ကြီး​ကို​ပါ သနား​မိ​သွား​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော်​တို့​မှာ​က သည်လို​အကြောင်းအရာ​တွေ​ကို လူ​သိ​ရှင်​ကြား ချ​ပြ​ဆွေးနွေး​လို့ မ​ရ​တာ​မို့ အများ​စု​ဟာ ထင်​တစ်​လုံး​နဲ့ ရမ်း​ကြိတ်​နေ​ကြ​ပါ​တယ်။ သူ​လို အမျိုးသား​တွေ​က ကျွန်တော်​တို့ ပတ်ဝန်းကျင်​မှာ ၉​၀ % မက ရှိ​နေ​မှာ​လည်း အသေ​အချာ​ပါ​ပဲ။
ကိုင်း… အမေး​ရှိ​တော့ အဖြေ​ရှိ​လာ​ပါ​ပြီ။
ပထမ ဆုံး လိင်​ဆက်ဆံ​မှု မစ​တင်​ခင် အပျိုး​ကာလ​က အရေးကြီး​ပါ​တယ်။ အမျိုးသမီး​တွေ​ဟာ အမျိုးသား​တွေ​နဲ့ မ​တူ​ပါ​ဘူး။ အမျိုးသား​တွေ​ကတော့ “ဆင်​လိုက်​တုန်း​တောင် ငယ်​ပါ​တင်း​နိုင်​ကြ​သူ​များ”ဖြစ်​ပေ​မယ့် အမျိုးသမီး​တွေ​က ဆင်​လိုက်​တာ ဝေး​စွ၊ စိတ်​ထဲ​မှာ တစ်​ခု​ခု ကြောင့်ကြ​နေ​မိ​တာ​နဲ့ လိင်​စိတ်​နိုးကြား​ဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲ​ပါ​တယ်။ ကိုယ်​ရော​စိတ်ပါ ကျန်းမာ​နေ​ပေ​မယ့် အမျိုးသမီး​တွေ​ရဲ့ အတွေး​ထဲ​မှာ မိသား​စု​ကိစ္စ​တွေ၊ စီးပွား​ရေး​ကိစ္စ​တွေ၊ လူ​မှု​ရေး​ကိစ္စ​တွေ​က လွှမ်းမိုး​ထား​စ​မြဲ​ပါ။ ဒါ့​ကြောင့် အပျိုး​ကာလ​နဲ့ သူ​တို့​ကို စိတ်​ပြောင်း​အောင် လုပ်​ပေး​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။
အ ပျိုး​မှာ အဆင့်ဆင့်​ရှိ​ပါ​တယ်။ ပထမ​ဆုံး​က လင်​ကို​မယား စိတ်လက် ကြည်​ကြည်သာ​သာ​နဲ့ ကြည်​ကြည်နူး​နူး ရှိ​အောင် လုပ်​ဖို့ လို​ပါ​လိမ့်​မယ်။ လက်​ကလေး ကိုင်​တာ၊ ပါး​ကလေး​နမ်း​တာ၊ ဆံပင်​ကလေး နမ်း​တာ​လေး​တွေ​ဟာ တ​ကယ့် အပျိုး​ပါ​ပဲ။ အိမ်ထောင်​သက် နှစ်​ပေါင်း ၃​၀ ပဲ ရှိ​နေ​နေ မ​ပျက်​မ​ကွက် လုပ်ဆောင်​ရ​မယ့်​အထဲ​မှာ အဲ​ဒါ​တွေ ပါ⁠ပါ​တယ်။
အဲ ဒီ့​က​မှ​တစ်​ဆင့် အရှိန်​လေး နည်း​နည်း ရ​ပြီ​ဆို​ရင် ပြင်​သစ်​အနမ်း၊ အနမ်း​စို စ​သ​ဖြင့် ခေါ်​တဲ့ နှုတ်ခမ်း​ချင်း နမ်း​တာ​က ဆက်​လာ​ရ​ပါ​တော့​မယ်။ သည်မှာ​လည်း လင်​ရယ် မယား​ရယ်​ဖြစ်လာ​မှ​တော့ တစ်​ယောက်​တစ်​ယောက် ရွံ​နေ​လို့ မ​ရ​တော့​ပါ​ဘူး။ ဒါ့​အပြင် မြန်မာ အမျိုးသမီး​အတော်​များ⁠များ​က အဲ​ဒီ့​အနမ်း​ကို မ​တုံ့​ပြန်​တတ်​ဘူး။ ရွံ့​နေ​တတ်​တယ်။ အဲ​တော့ အမျိုးသား​က သင်ပေး​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။ အမျိုးသား​က​လည်း တတ်​ဖို့ လို​တာ​ပေါ့​ဗျာ။ ပြင်​သစ်​အနမ်း ဋီကာ​ကို နောက်ကျ​တော့​မှ တစ်​ပုဒ် သတ်သတ် ရေး​ပေး​မယ်။ ဟုတ်​ပြီ​လား။
အဲ ဒီ့​အဆင့်​က​နေ နောက်​တစ်​ဆင့် တက်​ရာ​မှာ​လည်း မ​လော​ရ​ပါ​ဘူး။ ယောက်ျား​အများ​စု မှား​တတ်​တဲ့ အမှား​က နမ်း​ရင်း​နဲ့ သူ့​လက်ကြီး​က အမျိုးသမီး​ရဲ့ ရင်သား​ဆီ တန်း​ရောက်​သွား​တတ်​တာ​ပဲ။ ဟား… အလွဲ​ကြီး ခင်​ဗျ။
အမျိုးသမီး တွေ​ရဲ့ ကိုယ်​ခန္ဒာ​မှာ အာရုံ​နိုး​တဲ့​နေရာ​တွေ များ​စွာ ရှိ​ပေ​မယ့် ရင်သား​ကို တန်း​သွား​တာ​ကြီး​က နေရာ​မ​ကျ​ဘူး​ခင်​ဗျ။ ဖက်​ထား​ရင်း​က​နေ လက်မောင်း​လေး ပွတ်၊ ကျော​လေး​ပွတ် လုပ်​ရ​တယ်။ ရင်ခုန်​လာ​အောင် နှူး​ရ​တယ်။ သူ့​လက်ကြီး​က ငါ့​ရင်သား​ဆီ ရောက်လာ​တော့​မှာ… ဟော… ရောက်​တော့​မယ်… ဟင်… ဟုတ်​လဲ ဟုဘ်​ဘူး… အဲ​ဒီ့ ရွှေ​လက်​က ဘယ်​ရောက်​သွား​ရ​ပြန်​တာ​လဲ မောင်​ရယ်… ဟင့်… ဆို​တာ​မျိုး ဖြစ်လာ​အောင် စိတ်ရှည်​လက်ရှည် လုပ်​နိုင်​လေ အခြေအနေ ကောင်း​လေ⁠လေ​ပါ​ပဲ။
အဲ လို​နဲ့ ရင်သား​တွေ​ကို ညင်​ညင်သာ​သာ ထိ​တွေ့​ပေး​ရ​ပါ​တယ်။ ချို​လုံး​လေး​တွေ​ကို​လည်း အတူတူ​ပေါ့။ ညင်သာ​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။ အမျိုးသမီး​အနေ​နဲ့ သူ့​ကို ချစ်တယ်၊ မြတ်နိုး​တယ်၊ ယုယ​တယ်​ဆို​တဲ့ ခံစား​မှု ရ​လာ​အောင် လုပ်​ရ​မှာ​ပါ။ နှုတ်ခမ်း​ချင်း ဂဟေ​ဆက်​ထား​တာ​လည်း မ​ပျက်​စေ​ဘဲ လက်​က ရင်သား၊ ခြေထောက်​က ခြေထောက်​ချင်း ပွတ်​သီး​ပွတ်​သပ် က​ယု​က​ယင် နေ​ပေး​နိုင်​ရင်​တော့ အကောင်း​ဆုံး​ပါ​ပဲ။
အဲ ဒီ့​က​မှ အရှိန်​လေး တော်တော်​ရ​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ နှုတ်ခမ်း​ကို နေရာ ရွှေ့​လို့ ရ​ပါ​ပြီ။ သည်​နေရာ​မှာ ပစ်​မှတ်​က ချို​လုံး​တွေ ဖြစ်​ပေ​မယ့် အဲ​ဒါ​ကို​လည်း အလော​တ​ကြီး မဟုတ်​ဘဲ သိုင်း​သိုင်းဝိုင်း​ဝိုင်း ဖွဲ့⁠ဖွဲ့​နွဲ့⁠နွဲ့​လေး လုပ်​ပေး​တတ်​ဖို့ လို​ပြန်​ပါ​တယ်။ လုပ်​တတ်​ရင် အမျိုးသမီး​ဘက်​က အတော့်​ကို အဆင်သင့်​ဖြစ်လာ​ပါ​ပြီ။
ပါး စပ်​က နေရာ​ရွေ့​သွား​တော့ လက်​က အား​နေ​တယ်၊ ဘာ​လုပ်​ရ​မ​လဲ​လို့ မေး​ရင် အဖြေ​ရှိ​ပါ​တယ်။ လက်​က ဗိုက်​သား၊ ဆီး​ခုံ၊ ပေါင်၊ ဒူး စ​တာ​တွေ​ကို ညင်သာ​စွာ ထိ​တွေ့​ပေး​နေ​နိုင်​ပါ​တယ်။ သည်မှာ​လည်း ဦးတည်​ချက်​က ယောနိ​ဖြစ်​ပေ​မယ့် ရင်သား​မှာ​တုန်း​က​လို​ပဲ အမျိုးသမီး​က အလို​ချင် အတောင့်​တ​ဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်လာ​တဲ့​အထိ ရစ်​သီ ရစ်​သီ​နဲ့ အရစ်​ရှည်​နိုင်​လေ အကျိုး​ရှိ​လေ​ပါ။ တကယ်​လို့ အဲ​ဒီ့​နေရာ​ကို လက်​နဲ့ မဟုတ်​ဘဲ ပါး​စပ်​နဲ့​ပဲ စခန်း​သွား​လို​သေး​တယ်​ဆို​ရင်​လည်း လက်​က ယောနိ​က​လွဲ​လို့ ခါး​အောက်​ပိုင်း ကျန်​တဲ့ နေရာ​အနှံ့​ကို ထိ​တွေ့​ထား​နိုင်​ပါ​တယ်။
ပါး စပ်​နဲ့ ထိ​တွေ့​ဖို့ ကြံ​ရင်​လည်း ချက်ချင်း တန်း​မ​သွား​သင့်​သေး​ဘူး။ အမျိုးသမီး သိပ်​လိုချင်​လာ​အောင် ရစ်​သီ​ရစ်​သီ လုပ်​ပေး​ဖို့ လို​တယ်​ခင်​ဗျ။
ဒါ ဟာ အပျိုး​ကာလ​ပါ​ပဲ။ အတွေ့​အကြုံ နည်း​သူ အမျိုးသမီး​များ​အတွက် အဲ​ဒီ့ အပျိုး​ကာလ​ဟာ နာရီ​ဝက် ၄​၅ မိ​နစ်​လောက် အချိန်​ယူ​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။ အိမ်ထောင်​သက် ရင့်​နေ​တယ်​ဆို​ရင်တောင်​မှ အပျိုး​ကို အဖျင်း​ဆုံး မိ​နစ် ၂​၀ လောက် အချိန်​ယူ​ရ​ပါ​မယ်။ ကြာ​လေ၊ အချိန်​ဆွဲ​နိုင်​လေ၊ အမျိုးသမီး​အတွက် အရှိန်​တက်​လေ​ပါ။
အဲ လို အရှိန်​တက်​လာ​တဲ့​အခါ​မှာ​တော့ အမျိုးသမီး​ဟာ မ​သိ​မသာ​လေး နွေး​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ စိတ်​ဆန္ဒ​တွေ တက်​ကြွလာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ သူ့​ကိုယ်​ခန္ဒာ​က သွေး​တွေ​က​လည်း ယောနိ​နဲ့ ယောနိ​ထိပ်​က အကြော​ဆိုင် အဖု​အထုံး (အစေ့​လေး)ဆီ​ကို တိုး​နေ​ပါ​ပြီ။ သည်​အချိန်​မှာ ယောနိ​အတွင်း​ပိုင်း​နံရံ​က​လည်း တ​ဖြည်း⁠ဖြည်း​နဲ့ ချွေး​သီး​ချွေး​ပေါက်​များ​ကျ​သ​လို စိမ့်​ရာ​က နစ်​လာ​ပါ​တော့​မယ်။ သည်​အချိန်​မှာ​မှ လိင်​ဆက်ဆံ​မှု လုပ်​ရ​တော့​မှာ​ပါ။
အဲ လို​နဲ့ အာရုံ​က ဆင့်​ကာ ဆင့်​ကာ နိုး​လာ​တဲ့​အခါ​မှာ​တော့ သွေး​က တင်ပါးဆုံ​ရိုး​တ​ဝိုက်​မှာ ဆက်​ပြီး တိုး​နေ​ပါ​တယ်။ အသက်ရှူ​လည်း ပြင်း​လာ​တယ်။ နှလုံးခုန်​နှုန်း​လည်း တက်​လာ​ပါ​ပြီ။ ယောနိ​ရဲ့ အတွင်း​ပိုင်း​က​လဲ ငယ်​ပါ​ကို ဆုပ်​ညှစ်​ဖို့​အတွက် ကျဉ်း​သွား​သ​လို အပြင်​ပိုင်း​က​ကျ​ပြန်​တော့ ငယ်​ပါ​ကို ကြိုဆို​ဖို့​အတွက် ကျယ်​လာ​ပါ​တယ်။
အားလုံး အဆင်​ပြေ​နေ​ပြီ၊ အနှောင့်​အယှက် ကင်း​နေ​ပြီ၊ ဖုန်း​လည်း ထ​မ​မြည်​ဘူး၊ ကိုယ့်​ခင်ပွန်း​က​လည်း အခြေအနေ​ကို ဆက်​ထိန်း​ထား​နိုင်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ လိင်​အင်္ဂါ​တွေ၊ တင်ပါးဆုံ​တွေ၊ တင်ပါး​တွေ၊ ဆီး​ခုံ​တွေ​နဲ့ ပေါင်​တွေ​ဆီ​က အာရုံကြော​များ​နဲ့ ကြွက်သား​များ​ဟာ တ​ဖြည်း​ဖြည်း တင်း​သ​ထက် တင်း​လာ​ပါ​တော့​မယ်။ တင်းရင်း⁠တင်းရင်း​က​နေ ဟာ​ခနဲ ဖြစ်​သွား​ပြီး သာယာ​မှု​အပေါင်း ခ​ညောင်း​စွာ အားလုံး ပွင့်​ထွက်​သွား​သ​လို ခံစား​လိုက်​ရ​ပါ​မယ်။ အဲ​ဒါ ပြီး​တာ​ပါ​ပဲ။
အဲ သ​လို ပြီး​လိုက်​ချိန်​မှာ သားအိမ်၊ ယောနိ​နဲ့ စအို​တို့​က ၀.၈ စက္ကန့်​မှာ တစ်​ကြိမ်​နှုန်း​လောက်​နဲ့ ကြုံ့⁠ကြုံ့​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။ သိပ် ပြင်း​ပြင်းထန်​ထန် ပြီး​တာ မဟုတ်​ဘဲ တော်​ရုံ​ပြီး​တာ​ဆို​ရင် အဲ​လို ကြုံ့​တာ​က သုံး​ကြိမ်​မှ ငါး​ကြိမ်​လောက်​သာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ တ​ကယ့်​ကို အပြင်း​ထန်​ဆုံး ပြီး​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ၁​၀ ကြိမ်​မှ ၁​၅ ကြိမ်​အထိ ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒါ​မှ ပြီး​တာ အစစ်​ပါ။
အဲ လို ပြီး​ခြင်း​ဟာ အစေ့​ကို တိုက်ရိုက် လှုံ့ဆော်​လို့သော်​လည်းကောင်း၊ ယောနိ​ကို လှုံ့ဆော်​လို့သော်​လည်းကောင်း၊ နှစ်​ခု​လုံး ပေါင်း​ရုံး​ထား​တဲ့ အပေါ်​မှာသော်​လည်းကောင်း မူ​တည်​နေ​တတ်​သ​လို အမျိုးသမီး တစ်​ယောက်​နဲ့ တစ်​ယောက်​လည်း မ​တူ​ပါ​ဘူး။
တချို့ အမျိုးသမီး​တွေ​ကျ​တော့ ပြီး​ချိန်​မှာ တခြား​ကိုယ်​ခန္ဒာ​အစိတ်​အပိုင်း​တွေ ဖြစ်​တဲ့ ခြေဖျား​တွေ​ပါ ကုပ်​သွား​တတ်​သ​လို မျက်နှာ​မှာ​လည်း မဲ့​ရှုံ့​သွား​တတ်​တယ်။ တချို့​ကျ​တော့ ထူးဆန်း​တဲ့ အသံ​တွေ​နဲ့ ညည်းညူ​တယ်။ အများ​စု​ကတော့ ရုတ်​တရက် နာကျင်​သွား​သ​လို မျက်နှာထား​မျိုး​နဲ့ ဖြစ်​သွား​တတ်​ပါ​တယ်။ အမှန်​တော့ နာကျင်​တာ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။
နယ် သာ​လန်​နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်​တစ်​ခု​ရဲ့ နောက်ဆုံး​တွေ့​ရှိ​ချက်​အရ​ဆို​ရင်​တော့ သည်​အချိန်​မှာ အမျိုးသမီး​တွေ​ရဲ့ ဦးနှောက်​ထဲ​က ကြောက်ရွံ့​မှု​နဲ့ ခံစား​မှု​များ​ကို ထိန်း​ချုပ်​နေ​တဲ့ အစိတ်​အပိုင်း​တွေ ရပ်ဆိုင်း​သွား​တယ်​လို့ ဆို​ပါ​တယ်။ ရုတ်​တရက် သတိ​လက်လွတ် ဖြစ်​သွား​တယ်​ပေါ့။
သိပ် သေချာ​တဲ့ အချက်​တစ်​ချက်​က အမျိုးသမီး​အများ​စု​အတွက်​က အစေ့​ကို မ​ပြတ် လှုံ့ဆော် မ​ပေး​နိုင်​ဘူး​ဆို​ရင် ပြီး​ဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်း​တယ်​ဆို​တဲ့ အချက်​ပါ​ပဲ။ ဒါ့​ကြောင့် အမျိုးသမီး​တွေ လိင်​ဆက်ဆံ​ရင်း​နဲ့ ပြီး​ချင်​ရင်၊ ပြီး​စေ​ချင်​ရင် အမျိုးသမီး​က အပေါ်​က​နေ​တဲ့ ကိုယ်​နေ​ဟန်​ထား​က အသင့်တော်​ဆုံး​ပါ​ပဲ။ ဒါ​မှ သူ့​ကိစ္စ​အတွက် သူ့​ဘာသာ လို​သ​လို ချိန်​ညှိ​လို့ ရ​နိုင်​သ​လို အစေ့​နဲ့ အမျိုးသား​ရဲ့ ငယ်​ပါ​အရင်း ဆီး​ခုံ​အောက်​နား​က အသား​နဲ့ မ​ပြတ်​ထိ​တွေ့​အောင်​လည်း ကြံဆောင်​နိုင်​ပါ​လိမ့်​မယ်။
သည် လောက်​ဆို​ရင် အမျိုးသမီး ပြီး​တယ်​ဆို​တာ​နဲ့ ပတ်သက်​လို့ လို​တာ​ထက် ပို​ပြီး အတော်​လေး ပြည့်​ပြည့်စုံ​စုံ ရှင်း​ပြ​နိုင်​ခဲ့​ပြီ​လို့ ယူဆ​ပါ​တယ်။
စာ​ ကြွင်း – တကယ် သည်​ကိစ္စ​တွေ​ကို လေ့​လာ သိရှိ​ထား​တဲ့ ယောက်ျား​ဆို​ရင် ကိုယ့်​ဇနီး​ကိုယ် “ပြီး​လား”လို့ မေး​စရာ မ​လို​ပါ​ဘူး။ မ​မေး​ဘဲ သိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ မေး​ပြီ​ဆို​ကတည်းက အဲ​ဒီ့​ယောက်ျား​သား​ဟာ အပြာ​စာအုပ်​တွေ၊ အပြာ​ရုပ်​ရှင်​တွေ​ရဲ့ သွန်သင်​မှု အလွဲ​အမှား​တွေ​ကို​သာ နှလုံးသွင်း​ထား​လေ​တဲ့ “င​တုံး”လို့​သာ မှတ်​ကြ​ပါ​ခင်ဗျား